Salicylic Acid - Fampiharana
Asidra salisilika dia fanafody izay fampiasana ivelany ny fampiasana azy. Mora ny vidiny, saingy misy fomba maro ampiasaina ary tena manampy amin'ny olana samihafa.
Ireo toetra fototra amin'ny saline salicylika
Ny votoatin'io fiomanana io dia asidra, izay notifirina avy amin'ny valan-javamaniry. Ny herin'ny fitsaboana dia mitoetra amin'ny hoe misy fitsipika marobe amin'ny fiantraikany amin'ny hoditra:
Fipoirana lalina ao amin'ny tranonkala fangatahana.
Famaritana ny asan'ny sweaty sy ny trondro madinika.
Famongorana ny fizotry ny inflammatoire.
Famongorana ny ody.
Ny fampitony ny hoditra ivelany amin'ny hoditra sy ny fivalozana tsikelikely, izay mitarika ny fisarahana mora foana amin'ny hoditra.
Fanadiovana ny ratra avy amin'ny fitsaboana manimba sy ny fijanonana ny fiparitahan'ny bakteria.
Famenoana ny fizotran'ny fanasitranana, noho ny fitomboan'ny rà mandriaka ao amin'io faritra io amin'ny hoditra.
Noho izany, voalaza fa ny asidra salicylic dia manana ireto toetra manaraka ireto:
keratoplastika (amin'ny fisainana ambany);
keratolytika (amin'ny fifantohana avo).
Koa satria misy fomba maro ampiasaina, ny asidra salicylic dia azo jerena amin'ny endrika samihafa miaraka amin'ny singa samihafa ao amin'ny singa mavitrika:
vahaolana (rano sy rano) - 1% ary 2%;
menaka - 1%, 2%, 5%, 10%;
Fampahalalana momba ny asidra salicylique
Noho io fomba fiasa io dia ampiasaina ho an'ny medika sy ny cosmetology ity fanafody ity.
Fampiharana ny asidra salicylika amin'ny fitsaboana
Tena fampiasana azo avy amin'ny asidra salicylika amin'ny fitsaboana aretina amin'ny hoditra, avy amin'ny karazana samy hafa, toy ny:
Fanasitranana ratra marefo, ohatra, aorian'ny fandoroana.
Amin'ireny tranga ireny dia tsara kokoa ny mampiasa menaka miaraka amin'ny voka-dratsin'ny vatana mavitrika, ary amin'ny fikarakarana ny tsy fahampiana, ny fampiasana asidisilika dia tokony hampifangaroan'ny menaka solifara. Hanatsara ny fananana antibiotika izy ireo.
Ny asidra salicylika koa dia ampiasaina mba hampihenana ny fanaintainana rehefa:
arthrôs sy arthris.
Mba hanaovana izany, dia tokony hokaravasanao ny tranokala olana 3-4 heny isan'andro amin'ny famokarana alikaola amin'ny zava-mahadomelina na hampihatra tsindrimandry mandritra ny alina.
Fampiharana ny asidra salicylika amin'ny cosmetology
ho an'ny fitomboan'ny volo sy ny fanesorana ny roapolo;
avy amin'ny akne, akne, teboka mainty sy akne;
mba hanafoanana ny antsoantso sy ny katsaka;
mba hampihenana ny vontoaty matavy ao amin'ny hoditra;
mba hampidina ny hatsembohana amin'ny tongotra.
Mba hisorohana ireo olana ireo, dia asaina ampiasaina ny solika salicylika.
Saingy raha ny fanazaran-tena, dia mbola afaka mampiasa paty manokana vita amin'ny saline salicylic, Salipod. Voageja mandritra ny 48 ora izy io, ary avy eo mafana ao anaty rano mafana ary esory ny haavony. Io fiverimberenana io dia averimberina imbetsaka raha ilaina mba hialana tanteraka.
Raha tsy afaka mividy paty toy izany ianao, dia mety hosoloina ranom-boankazo avy amin'ny saline salicylique, izay ampiharina ary mitazà mandra-pahasitrany.
Noho ny fahaverezan'ny volo sy ny fanondranana roapolo, ity saron- doko manaraka ity dia asaina:
Mampiasà solika salicylika ho an'ny hodi-doha sy ny fotony.
Fenoy ny cellophane na kapa fingotra mandritra ny 30 minitra.
Aorian'izay, dia sasao amin'ny rano mandeha tsara.
Alohan'ny hanombohanao hanafoana ireo olana ireo amin'ny hoditra, tokony hifantina mpikaroka na dokotera iray ianao, satria maro ny tsy fitoviana amin'ny fampiasana azy sy ny fampiharana manokana amin'ny karazana hoditra samihafa.
Inona no toetran'i Gyoxysone?
Hoarfrost amin'ny volom-borona - volombava volafotsy
Cosmetics ho an'ny hoditra
Solosaina SPF 50
Volon'ny doka amin'ny tanana manokana
Ahoana ny fomba hanasana ny tavy avy amin'ny maingoka?
Mpihoraka roapolo ho an'ny motoblock
Vehivavy rojo sy rojo vy - Fifandraisana
Fanatanjahana ho an'ny tanana
Fanomezana voalohany ho an'ny reny
Tarika Zara - ireo modely modely sy malaza avy ao Zara
Tavoahangy tomaty - recipe
Ny vadin'i Angelina Jolie
Sofabes ho an'ny efitra fandraisam-bahiny miaraka am-pandriana
Ahoana no ahafahana manala ny volon'ny voankazo?
Vato fotsy eo amin'ny fasa